Tianao ve ny handray anjara amin'ny Diabe ho avy izao? - Ny Martsa Manerantany
Tianao ve ny handray anjara amin'ny Diabe ho avy izao?
Home » Tianao ve ny handray anjara amin'ny Diabe ho avy izao?
Ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona izao dia hetsika ara-tsosialy izay hiainga amin'ny diany faharoa amin'ny 2 2019 ny volana Oktobra. Ny Martsa Maneran-tany voalohany dia natao tamin'ny taona 2009 ary afaka nampiroborobo Hetsika an-jatony teo amin'ny tanàna 400. Fotoan-dehibe iray lehibe izay maniry ny hanatratra indray sy handresy amin'ny Diabe Maneran-tany.
The World Martsa fihavanana sy tsy hiady dia nokarakarain'ny vondrona amin'ny mahaolona fahitana, niparitaka maneran-tany miaraka amin'ny tanjona iombonana ny mamorona sy hampitombo ny fanentanana ny ilaina ny fiaraha-monina maneran-tany miaina ao anatin'ny fiadanana sy ny tsy hiady .
Ary noho izany dia zava-dehibe ny fandraisan'ireo mpandray anjara vaovao anjara amin'ity hetsika vaovao ity. Raha anisan'izy ireo ianao ary te hahafantatra antsika tsara kokoa, manasa anao hijery ny tranonkala, hamaky ireo lahatsoratra samihafa ao.
Karazana fandraisana anjara inona no tadiavintsika?
Koa satria ny World Diabe ho an'ny Fandriampahalemana sy ny tsy hiady isika rehetra misokatra ho fikambanana, fikambanana na iombonana, olona, ​​na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao izay te-hiasa amintsika mba hanohana izany fandraisana an-tanana indray. Araka ny voalaza etsy ambony, dia hanomboka ny diabe 2 2019 Oktobra ary handeha manerana izao tontolo izao, nifarana ny 8 2020 Martsa.
Amin'ity fandraisana anjara mandray anjara ity dia mihevitra isika fa ireo olona na fikambanana hita taratra amin'io hetsika io, dia mankanesa amin'ny fankalazana amin'ny fananganana fiaraha-miombom-pihetseham-paritra mandritra ny vanim-potoana mandritra ny diany.
Ireo hetsika sy hetsika rehetra natao dia tsy mahasoa, izany hoe, tsy misy ny fandrosoana ara-toekarena, ary ny famonoana dia tsy maintsy mihazakazaka irery.
Mitady izahay fiarahamonina na olona manoloana ny antony ary maniry ny handray anjara sy hamorona fifandraisana mivantana amin'ny mpikarakara.
Ny fampiroboroboana ny fampandrosoana dia tokony hampiroborobo ny fitarihana olona maromaro (ankizy na olon-dehibe) Mpandray anjara 20, fara fahakeliny, ny idealy.
Raha te handray anjara ianao, saingy tsy manana hevitra momba ny hetsika manokana ianao, dia hifanerasera aminao izahay mba hanolotra ohatra sasantsasany momba ny zavatra azo atomboka. Fa ny tolo-kevitra ihany koa dia azo amplarana sy feno avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetsika raha mbola eo anelanelan'ny soatoavin'ny volana martsa izy ireo.
Hangataka ianao hisafidy andro iray handehanana 2 tamin'ny Oktobra hatramin'ny 2019 ka hatramin'ny 8 tamin'ny Martsa 2020, hamolavola ny asa nofidiana ary mety ho anisan'ny diabe maneran-tany izany. Miankina amin'ny daty hanaiky anay, ny hetsika dia ho anisan'ny diabe lehibe, na mety ho anisan'ny diabe faharoa.
Rehefa voasoratra anarana tonga azy ireo ho mailaka ny adiresy mailaka izay efa voalaza, izay hanomboka hanome fanazavana fanampiny fifandraisana, ary miezaka mba hanangona vaovao izay takiana mba hanatanteraka amim-pahombiazana ny asa.
Zava-dehibe foana ny fananana fanohanana ara-maso (sary na horonan-tsary), mba hahafahan'izy ireo mizara ao amin'ny tranonkala sy amin'ny tambajotra sosialy ao amin'ny fikambanana, ka mamorona rakitsoratra an'io andro manan-tantara io.
Ahoana ny fandraisana anjara amin'ny hetsika?
Ny olona rehetra na fikambanana maniry ny hanolo-tena mamorona zava-mitranga kely na asa mandritra ny andro-diabe, ihany no mila tsindrio eo amin'ny bokotra ity mba handray anjara sy hamela ny antsipiriany mba hahafahantsika mifandray amin'ny alalan'ny mailaka anao, dia ho tahaka izany velively ilaina sy dia afaka kevitra sasany hevitra ho an'ny asa hatao.
Mifalia sy miaraha amin'ity hetsika!
Alefaso aminay ny anton-kevitra fandraisana anjara
Tsy maharitra ara-potoana mandra-pahatongan'ny fananganana fitaovam-piadiana vaovao. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray amin'ny info@theworldmarch.org